Orange-Vanilla မျောက်ပေါင်မုန့် - Vanilla Cream ဒိန်ခဲအေးခဲခြင်းနှင့် Vanilla မယားစကားများ
Web Deliciousness - စတော်ဘယ်ရီ။
ဤ Ree-Style အင်္ကျီများသည်ဒေါ်လာ ၅၀ အောက်သာရှိသည်
'beverly Hills ရှိအိမ်ရှင်မများ' ကိုသိကျွမ်းပါ။
Vanilla Cream ဒိန်ခဲအေးခဲခြင်းနှင့် Vanilla မယားစကားများ
ပုံမှန်မျောက်ပေါင်မုန့်၏အံ့ဖွယ်ကောင်းသော်လည်း citrus / vanilla လှည့်ကွက်နှင့်အတူ။ သေရန်အတွက်! ကြော်ငြာ - အထွက်နှုန်းအောက်တွင်ဆက်လက်ဖတ်ရန် -၁၂စားသုံးခြင်း ပြင်ဆင်ချိန် -0နာရီ၁၀မိနစ် ချက်ပြုတ်ချိန် -0နာရီ၂၅မိနစ် စုစုပေါင်းအချိန်:0နာရီ၃၅မိနစ် ပါဝင်ပစ္စည်းများ၃ ဘူးခွံများ (၇.၅ အောင်စတစ်မျိုးစီ) နို့ထွက်ပစ္စည်း (Flaky မျိုးမဟုတ်)၊ အအေး 1 C. သကြား နှစ် မြေတပြင်လုံးလိမ္မော်, Zested ၁ ဆား dash နှစ် ဆားထောပတ်ကိုတုတ် 3/4 ဂ။ အညိုရောင်သကြား 1 tbsp ။ vanilla ထုတ်ယူဒီပစ္စည်းစျေးဝယ် module ကိုတတိယပါတီမှဖန်တီးပြီးထိန်းသိမ်းထားပြီး၊ ဒီစာမျက်နှာသို့တင်သွင်းသည်။ သင်ဤအချက်အလက်များနှင့်အလားတူအကြောင်းအရာများကိုသူတို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ပိုမိုရှာဖွေနိုင်သည်။ လမ်းညွှန်မီးဖို 350 အက်ဖ်မှ Preheat
ပထမ ဦး စွာဘီစကွတ်ဘူးခွံများသည်အလွန်အေးသည်။
ဘီစကစ်ဘူးခွံများကိုဖွင့်ပြီးဘီစကွတ်များကိုလေးပုံတစ်ပုံခွဲပါ။ Ziplock အိတ်ကြီးကိုသကြား၊ လိမ္မော်ရောင် zest နှင့်ဆားခွက်ဖြင့်ဖြည့်ပါ။ အိတ်ကိုတံဆိပ်ခတ်ပြီး zest နှင့်သကြားလုံးဝပေါင်းစပ်သည်အထိလှုပ်ခါပါ။ ဘီစကစ်တုံးအပိုင်းအစများကိုအိတ်ထဲထည့်ပြီးတံဆိပ်ခတ်ပြီးလှုပ်ပါ။ လှုပ်ခါလိုက်သည်။ ဘီစကစ်အပိုင်းအစများအားလုံးကိုလိမ္မော်သကြားထဲတွင်ဖုံးအုပ်သည်အထိ။ အပိုင်းအစများကို bundt သို့မဟုတ် tube pan ထဲသို့သွန်း။ ၎င်းကိုဖယ်ထားပါ။
အလတ်စားအပူကျော်အလယ်အလတ်ဒယ်အိုးထဲမှာ, အနိုင်နိုင်ပေါင်းစပ်သည်အထိအညိုရောင်သကြားနှင့် vanilla အတွက်နှိုးဆော်ထို့နောက်ထောပတ်အရည်ပျော်။ ထိုအရောအနှောများကိုဘီစကွတ်မုန့်များလုံးကိုသွန်းလောင်းပြီးလျှင်ထောပတ်နှင့်အညိုရောင်သကြားအားလုံးကိုရရှိရန်ဒယ်အိုးကိုခြစ်ပြီး။ ထို့နောက်သူသည်မီးဖို၌ထားပြီးလျှင်စက္ကန့်အနည်းငယ်ခန့်ထားပါ။
၂၅ မိနစ်ဖုတ်ရမည်၊ သို့မဟုတ်ဘီစကွတ်၏ထိပ်သည်ရွှေရောင်အညိုမရောက်မီအထိဖြစ်သည်။ ထိုအခါမီးဖိုထဲကဒယ်အိုးကိုဖယ်ရှားပြီးတစ် ဦး ထိန်သိမ်းပေါ်မှာထားကြ၏။ ဒယ်အိုးသည်အနည်းဆုံး (၁၀) မိနစ်ခန့်ထိုင်ပါ (ထို့နောက် ၁၅ မိနစ်ထက်မက)၊ ပြီးလျှင်ကိတ်မုန့်ကိုဒယ်အိုးထဲမှကိတ်မုန့်တစ်ခုထဲသို့လှည့်ပါ။
မှတ်စု: ဒယ်အိုးထဲမှပထမဆုံးထွက်လာသောအခါအရည်ပျော်နေသောသကြား / ကရမေလသည်ပူသောဘက်တွင်အနည်းငယ်ရှိလိမ့်မည်။ အမှုတော်ဆောင်ခြင်းမပြုမီကထွက်လှည့်ပြီးနောက်မိနစ်အနည်းငယ်စောင့်ပါ။
တနင်္ဂနွေနေ့တွေအားလုံးငါမြို့ထဲကနေထွက်ပြီးမနေ့ကမွန်းလွဲပိုင်းမှာလေဆိပ်ကထွက်လာတယ်။ ဘယ်နေရာမှာမဆိုအိမ်ကနေမြို့ကိုဖြတ်ပြီးမြို့ကိုဖြတ်သွားတဲ့အခါငါအမြဲတမ်းလုပ်နေကျအတိုင်းငါကလေးတွေဆီခေါ်ပြီး၊ ငါယဉ်ကျေးမှုကနေတိကျတဲ့တစ်စုံတစ်ရာလိုချင်လားရှိသလား၊ မွေးမြူရေးခြံကိုမသွားမီငါယောဂဘောင်းဘီကိုအလျင်အမြန်လှူဒါန်းပြီးနေထိုင်ဖို့စီစဉ်ခဲ့တယ်။ The Amazing Race, The Good Wife ညနေခင်းနှင့်ပြည့်စုံသောလှုပ်ရှားမှုမရှိခြင်းအတွက်ဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့်ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထဖြစ်သည့်အတိုင်း၊ ကျွန်ုပ်၏အဖိုးတန်။ ကောင်းမွန်စွာပြုမူနေထိုင်သောကလေးများသည်ဖုန်းထဲသို့အော်ဟစ်သံကိုကြားရသည် -
ချိုမြိန်တစ်ခုခု ငါတို့အတွက်ချိုမြိန်တဲ့အရာလိုတယ်။ သငျသညျချိုမြိန်တစ်ခုခုဆောင်ခဲ့မဟုတ်လျှင်အိမ်ပြန်မလာကြနှင့်
နို့၊ လိမ္မော်နှင့်ဖျော်ရည်နှင့်ပေါင်မုန့်ရရန်မြို့ရှိကုန်စုံဆိုင်တွင်ကျွန်တော်ရပ်လိုက်သည်။ ချိုသောအတွေးအခေါ်များ၊ ကွတ်ကီးများမှသည်အရာအားလုံး (သို့သော်ထောပတ်ကိုပျော့ပြောင်းစေရန်စောင့်ဆိုင်းရမည်) စာရွက်ကိတ်မုန့်အထိကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးသည်။ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကပြုလုပ်ခဲ့သောအရာတစ်ခု (ပေါင်မုန့်ဖုတ်ရန်အတွက်) လုပ်ခဲ့သေးသည်။ သို့သော်ငါရေခဲသေတ္တာထဲမှနောက်ဆုံးတစ်ခုကိုသုံး ခဲ့၍ အပေါ်ယံလွှာကိုပြုလုပ်ရန်လိုသည်။
ဘယ်ကလေးကမျောက်မုန့်ကိုမကြိုက်ဘူးလဲ မျောက်ပေါင်မုန့်ကိုဘယ်သောအခါမှမစားတတ်ပါသနည်း။ မျောက်မုန့်ကိုဘယ်ခွေး၊ ကြောင်၊ ကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေဟောင်းရိုင်ယန်သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်များနှင့်နှစ်များကဤဂန္ထဝင်သစ်ကြံပိုးခေါက်မျောက်မုန့်စာကိုတင်ခဲ့သည်၊ ငါအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါ၊ ကလေးတွေကိုဖက်လိုက်တယ်၊ Marlboro Man ကိုနမ်းပြီးချာလီကိုမုန်းတီးလိုက်တယ်။
ပထမတစ်ခုကလိမ္မော်သီးတစ်လုံးကို zest ။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သာအေးခဲ့လျှင်ကျွန်ုပ်သည် microplane zester ကိုသုံးလိမ့်မည်။ သို့သော်လည်းငါသည်လမ်းခရီး၌တစ်နေရာရာသတ္တုတွင်းဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
ဘာသာပြန် - ကျွန်ုပ်၏ယောက်ျားများသည်၎င်းနှင့်အတူသစ်ပင်တစ်ပင်ကိုတစ်နေရာတွင်တွေ့ရန်ကြိုးစားခဲ့ဖွယ်ရှိသည်။
ပြီးတော့…ဟယ်လို! သုံးသေးငယ်တဲ့လုပ်နိုင်တဲ့ရဲ့ o 'ဘီစကွတ်။
ဟားဟား။ ဟားဟား။ ဟားဟား။ ဟတ်
အရေးကြီးတဲ့မှတ်စုတစ်ခု - ရေခဲသေတ္တာထဲမှရေခဲသေတ္တာထဲမှထုတ်ယူပြီးတဲ့နောက်မှာဘီစကွတ်တွေဟာအရမ်းအေးတဲ့အခါအေးပါ။ ငါသတ္တုတွင်းခဏများအတွက်ကောင်တာပေါ်မှာထိုင်ပါစေချင်ပါတယ်သူတို့ကိုင်တွယ်ရန်အဖြစ်လွယ်ကူသောမဟုတ်ကြ။
ငါနဲ့တူမနေပါနဲ့ အစားအသောက်ဆိုင်တွေကိုစွန့်ပစ်တာကိုမုန်းတယ်။ ဒါကြောင့်ငါကလုပ်ဖို့မရွေးချယ်ပါ။
အိုကေအခုကြီးမားတဲ့ ol 'ziploc အိတ်ကိုကိုင်ပြီးသကြားတစ်ခွက်နဲ့ဆားခွက်တစ်ခုထဲပစ်ထည့်လိုက်တယ်။
ထိုအခါလိမ္မော်ရောင် zest အတွက်ပစ် ...
ထိုအိတ်ကိုတံဆိပ်ခတ်ပြီးသကြားနှင့် zest တစ်ခုနီးပါးဖြစ်လာသည်အထိအတူတကွလှုပ်ခါပါ။
ဘီစကွတ်မုန့်များကိုပစ်ချပါ။ (ငါလုံလောက်စွာအလေးပေး။ မရပါ။ သူတို့အအေးမိနေစေဖို့သို့မဟုတ်သင့်လက်၌ကပ်လျက်ခေါင်းကိုက်ခြင်းရှိစေရန်သေချာစေပါ) ...
လိမ္မော် - သကြားအရောအနှော၌ဘီစကွတ်မုန့်များလုံးဝမဖုံးအုပ်မှီတိုင်အောင်လှုပ်ခါ၊ လှည့်ပါ၊ သို့မဟုတ်လှည့်ပါ။
ဘီစကွတ်မုန့်များကို Bundt pan ထဲသို့အရသာခံ။ စက္ကန့်ပိုင်းလောက်ဖယ်ထားပါ။
ယခုဆိုးသောအပိုင်းအတွက် - အလယ်အလတ်ဒယ်အိုးတွင်ထောပတ် ၂ ချောင်းကိုအရည်ကျိုပါ။
ထိုအခါ 3/4 ခွက်အညိုသကြားထဲမှာပစ် ...
vanilla ထုတ်ယူမှု၏ဇွန်းကောင်းတစ်ခု ...
ပြီးတော့အတူတူကအားလုံးကိုနှိုးဆော်။ အားလုံးကိုပေါင်းစပ် / ဖျက်သိမ်းရရန်မလိုအပ်; သင်မကျင့်လျှင်အမှန်တကယ်ပိုကောင်းပါတယ်။
ဒီဖြစ်ပျက်တော့မယ်ဆိုတာခင်ဗျားသိတယ်။ အခုဘီစကစ်အပိုင်းအစအားလုံးကိုဒယ်အိုးထဲမှာထည့်ထားပါ။ ထောပတ်ဟာအညိုရောင်သကြားနဲ့အနည်းငယ်ကွာခြားပေမယ့်စိတ်မပူပါနဲ့။ ကအားလုံးမီးဖို၌တ ဦး တည်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
ဤသည်ဒီမှာမှား၏ငါးဆယ် Shades ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့နောက်မီးဖို၌ ၃၅၀ ဒီဂရီမီးဖို၌ ၂၅ မိနစ်ခန့်ကြာအောင်ဖုတ်ရမည်။ အပေါ်ယံသည်ရွှေရောင်အညိုရောင်ဖြစ်သည်။
ပြီးတော့ဒါကခက်ခဲတဲ့အပိုင်းပါ။ သင်ကမီးဖိုထဲကနေဖယ်ထုတ်ပြီးနောက် ၁၀ မိနစ်လောက်ကြာအောင်သင်ဘေးဖယ်ထားရမှာဖြစ်တယ်။ အဲဒီမှာအများကြီး buttery caramely ပစ္စည်းပစ္စယရှိပါတယ်, သင်အရမ်းလျင်မြန်စွာထွက်လှည့်လျှင်, သူကအရပျလုံးကိုကျော်ပြေးခြင်းနှင့်လဲလိမ့်မယ်။
ဝန်ခံချက် - ငါကဒယ်အိုးထဲကလှည့်လိုက်တာနဲ့မလွယ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်ငါကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းလျှင်, သူကဒယ်အိုးထဲမှာကပ်လိမ့်မယ် ... ဒါကြောင့်ငါနှစ်ခုဘေး၏အငယ်ဆုံးကောက်ယူခဲ့သည်။
ထိုအခါမကောင်းသောအပြော ... ငါ့စကား, ဒီကောင်းသောဖြစ်ခဲ့သည်။ အနည်းငယ်အရမ်းကောင်းတယ်။ စေးကပ်, caramely, လိမ္မော်ရောင်, ချိုမြိန် ... ugh ။
ငါဒီနေ့ penance လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။
ဤတွင်အသောနေရာလေးကို dandy print ထုတ်လို့ရပါတယ်!
ဆွေစဉ်မျိုးဆက်စာရင်း: ဘယ်သူလဲ, ဘယ်အချိန်မှာဘယ်မှာ
“ အပြာရောင်သွေး” အားလုံးသည်အဖွဲ့ဝင်များကိုသိရန်ချပစ်သည်
အီတလီ Sausage နှင့် Peppers Pasta Sauce
Arugula နှင့် Pesto Mayo နှင့်အတူ Ham Sandwiches
st Joseph of cupertino ဆုတောင်းချက်များ
606 သည် ဝိညာဉ်ရေးအရ ဘာကိုဆိုလိုသနည်း။
သံပုရာရည်ဟာ သံပုရာရည်နဲ့ အတူတူပါပဲ။
အကောင်းဆုံး Lasagna ချက်နည်းကို ရှေ့ဆောင်အမျိုးသမီး
trisha yearwood မှာ ကလေးရှိလား။